ညီလင်းသစ်: ကြယ်ပန်းတခင်းနဲ့ လင်းတဲ့လူ ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 21.11.11
I never seen stars like that before.
သည်ရက်တွေ စာမဖတ်ဖြစ်တာနဲ့မသိလိုက်ဘူးအကိုရေ .
သိလဲ ဟဲဟဲ အဲလောက်ဆို ခေါင်းဦးပုံထဲ ၀င်နေတဲ့ပိုလာဝက်ဝံဖြစ်နေလောက်ပီ .
ည ၉ နာရီကျော်တာနဲ့အော်တို မျက်လုံးပိတ်ပီးသားရယ် ..
အဲလို ညတွေကိုမခံစားဖြစ်တာကြာပေါ့ .ရန်ကုန်ကထွက်လာကတည်းကဆိုပါတော့ .အမေနဲ့အတူတူ ညလသာသာ ကြယ်ကြွေချိန်တွေကို မကြည့်ရတာကြာခဲ့ပြီ
စက်ာပူမှာ သာတဲ့လ ကတော့
သာပေမယ့်လဲ အလကား ဖြစ်နေပြီအကိုရေ
ကျနော်လည်း ခုရက်ပိုင်း ကောင်းကင်ကို ခဏခဏ မော့ကြည့်နေဖြစ်တယ် အထူးသဖြင့် ညနေပိုင်း နဲ့ ညဦးပိုင်းတွေမှာပေါ့ ။ တော်တော် လှတယ်လို့ ခံစားမိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲပဲ သိမ်းထားဖြစ်တော့တယ် အစ်ကို့လိုတော့ပြန်ဝေမမျှတတ် မတတ်ဆို ရိုက်လိုက်ရင်လည်း မဲမဲကြီးတစ်ခုပဲ ပေါ်တာကိုး ဖိုတိုကရက်ဖာကြီးရဲ့း)))
သိုင်းကျူး ဖိချိုင်း :P
ဟီးဟီး ပုံတွေကောင်းကောင်း ကြည့်ရအောင် ဆက်ကြိုးစားပေးပါလို့ ကိုညီလင်းသစ်ကို တောင်းဆိုချင်တယ်။ အနည်းဆုံး စပြီးတော့ လုပ်ဖြစ်သွားပြီးပေါ့။
မိုးကောင်းကင်ကြည့်တာတော့ ၀ါသနာပါတယ်ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ မကြာခဏလဲ မော့ကြည့်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပဲ ကံမကောင်းတာလားတော့မသိ.. ကိုယ်မော့ကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်း ကောင်းကင်က သိပ်တည်ငြိမ်လွန်းနေတယ်။ ဘာအပြောင်းအလဲမှမရှိ။ အနှစ်၄၀အတွင်းမှာ ကြယ်ကြွေတာကို ရှားရှားပါးပါး ၂ကြိမ်ပဲတွေ့ဖူးတယ်။ ငယ်ငယ်က၁ကြိမ် မနှစ်က၁ကြိမ် ကြယ်ကလေး၁လုံး ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ရွှတ်ကနဲဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒါပဲ။ ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်တဲ့ ကြယ်ကြွေနည်း...း))
ဒီလိုမျိုး ကြယ်တွေအများကြီးကြွေတာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ကြည့်ရတာ အတော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်။ ကြယ်တံခွန်တို့ ဥက္ကာပျံတို့လဲ တစ်ခါမှကို မမြင်ဖူးဘူး။ အခုလို တကူးတက ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကြယ်တွေကြည့်ရတာ သိပ်ကြိုက်တယ် မလေးပို့စ်တွေဆို သွားသွားဖတ်တယ်...အဲလိုကြယ်မိုးရွာတာလဲ သိပ်မြင်ဖူးချင်တာပဲ...။ ကင်မရာအကြောင်းတော့သိပ်နားမလည်ပေမယ့် ကိုညီလင်းသစ်ရိုက်ထားတဲ့ ကြယ်မိုးပုံသိပ်လှတယ်...။ တကယ်အပြင်မှာဆို ဘယ်လောက်တောင်လှလိုက်မလဲ..။ ကောင်းကင်ကိုကြည့်ရတာ ကြိုက်လို့ ကမ်းခြေသွားရင်ညဘက် သောင်ပြင်မှာ အိပ်ပြီးတောင်ကြည့်ဖူးတယ်....။
မြို့ ပြင်ထွက်လိုက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးနေမှာနော်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလောက်တောင်မှ အတော်ကောင်းနေပါပီ။
မလေး ရေးထဲက စိတ်ဝင်စားနေတာ။ အခုလို လက်တွေ့စောင့်ကြည့်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အခုလို ပြန်လည်မျှဝေတော့ ဖတ်ရသူတွေ ပိုအရသာရှိတာပေါ့..။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံတွေ့ခွင့်ရလိုက်တော့ ကျေနပ်မှုဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ အခုထိ မပေါ်သေးလို့ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လာပုံတွေကြည့်ဦးမယ်။ ( မနက်ထဲက ကွန်နက်ရှင်မတရားနှေးနေထှာ)
တော်လိုက်တာ... ညီလင်းသစ်က professional နီးပါးရိုက်နိုင်တာဘဲ...အမဆို ဒီလိုပုံထွက်အောင်မရိုက်တတ်ဘူး... နားလဲမလည်ဘူး... ကိုယ်သာရိုက်ဖြစ်ရင် ဒီလိုပုံတွေမထွက်မှာသေချာတယ်...
Well done bro. Nice Photos.
တစ်ပုံကို စက္ကန့် ၃၀ နဲ့ ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ပုံ ၁၆ ပုံ ပြန်ပေါင်းထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေး သဘောကျတယ်။ ညီမဆို စဉ်းစားမိမယ်မထင်ဘူး။ ကမ္ဘလည် တာ အစ်ကို ဒီလိုနည်းနဲ့ ဖမ်းထားတာလေ။
အလုပ်ကများ၊ ဒီကြားထဲ ဘောနပ်စ်စိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့ ဘယ်ကိုမှ မရောက်တာ ကြာပေါ့။ ဒီနေ့မှ စပြီး ဘလော့ဂ်ပြန်လည်ပါတယ်။ လာလိုက်တာနဲ့ အထူးအဆန်းတွေ တွေ့ရတော့တာပဲ။ ကျွန်မရိုက်ရင်တော့ မှောင်နဲ့ မဲမဲပဲ တွေ့ရမှာ...ဟဟဟ။
အားထုတ်မှုအတွက်ရော၊ မျှဝေမှုအတွက်ပါ ကျေးဇူးပါရှင်...
These photo are amazing. Thanks for sharing star photo. What is that thing which is written "Facebook" on it
ကြယ်တွေကြွေတာကို အေးအေးချမ်းချမ်းမှာ တကူးတက ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးတာကိုက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်လည်း ခုလိုပုံလေးတွေ မြင်ရတာပေါ့
မဟုတ်ရင် ကိုယ်ဖာကိုယ်ဆို ကြယ်တွေကြွေတာ မြင်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး..
ကောင်းကင်ကလည်း ကြယ်တွေကို စုံနေတာပါဘဲလား..
မြို့ရဲ့ မီးရောင်ကြောင့် အနက်ရောင်ကတ္တီပါ မဟုတ်ဘဲ အညိုရောင် ကတ္တီပါပေါ် ဖြန့်ကြဲထားတဲ့ စိန်ပွင့်လေးတွေ ဖြစ်သွားတယ်နော်..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရတာ သိပ်လှပါတယ်
ဓာတ်ပုံ ၁၆ပုံကို ပေါင်းထားတဲ့ အိုင်ဒီယာသိပ်ကောင်းတာဘဲ..
ဒီလောက်တောင်ကြွေတာ ဒီပုံကြည့်မှ သေချာ သိရတာ..
ကိုညီလင်းရဲ့ အားထုတ်မှုကို တလေးတစား...ပြီးတော့... တအံ့တသြ ကြည့်ရင်း...
ကြယ်တွေကြွေတဲ့ လမ်းမှာ ထရိုင်ပေါ့ထ်ကို ထမ်းရင်း တိုးတိတ်စွာ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်... ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးမှာ တခုခုကို လွမ်းသွားတယ်...း)
ကြယ်တွေကြွေနေလား.. ထူးအိမ်သင်သီချင်းလေး မညည်းခဲ့ဘူးလား...
ကြယ်တွေကြွေတာ ခုမှပဲ မြင်ဘူးတော့တယ်။ ဗီဒီယိုလေးပါကြည့်ရရင် ကောင်းမှာ .. :-) မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အကို..
ထိပ်ဆုံးကပဲအကိုရ...၊ဒါပေမယ့် အကိုခုလို သေသေချာ
ချာ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြ
သေးပါဘူးအစ်ကိုရ...မသကာ ဘီဘီလေး တစ်လုံး
ပုံတွေကကောင်းပါတယ်အစ်ကို...နောက်ထပ်များများထပ်ကြည့်ချင်သေးတယ်..။ ငယ်ငယ်ကတောင်ကြီးမှာ ကြယ်ကြွေတာတစ်ခါဘဲမြင်ဖူးတယ်...မြန်တယ် မျက်စိတမှိတ်အတွင်းဘဲ...အခုလိုဆောင်းတွင်းမှာဘဲထင်တယ်.. ။ အားလုံးထဲမှာ Army Knife လေးကိုစိတ်အ၀င်စားဆုံးဘဲ... တစ်ခုလောက်ဝယ်မလို့ ..လေယာဉ်တွေပေါ်ဘာတွေပေါ်သယ်လို့မရဘူးထင်တယ်..။
ည ၉ နာရီမှာ ခေါင်းချနိုင်တာ နည်းတဲ့ ကုသိုလ်လားဗျာ၊ အဲဒီအဖြစ်မျိုး ကျနော့်မှာ မရှိတာ ကြာပါပြီ..၊း(
ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း တိတ်တိတ်လေး ခံစားတာဟာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲဗျ...၊း)
အေးဗျ၊ ကျနော်လည်း တေးထားတယ်၊ လာမယ့် နွေရာသီမှာ ကြယ်တွေစုံတဲ့ ညတစ်ညတော့ ကြုံဖြစ် ဦးမှာပါ..၊
နေညိုညို လမ်းလေးထက် နေ့စဉ် စောင့်နေဆဲ..၊ မျှော်လင့်ခြင်းများရယ် အိမ်ပြန်ချိန် များရယ်....၊း)
ကျနော်လည်း အရင်က ဟုတ်တိပတ်တိ သိပ်မတွေ့ဖူး ပါဘူးဗျာ၊ အခုတော့ ကြယ်ကြွေမယ့်ရက်တွေ ပြထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေကို စိတ်ဝင်စားစ ပြုလာပြီ...၊း)
အဲဒီလို မြေပြင်မှာ လှဲလျောင်းပြီး ကောင်းကင်တခွင်လုံး ကို ကြည့်ရတာ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ၊ ကျနော့်မှာ အေးလွန်းလို့သာ မတ်တပ်ရပ်နေ ခဲ့ရတာ...၊း(
စိတ်ဓါတ်မကျအောင် အားပေးသွားတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ညီမရေ..၊ နောက်တစ်ခေါက်တော့ လယ်ကွင်းတွေ ရှိတဲ့ဖက်ကို သွားမယ်...၊
ကွန်နက်ရှင် အခက်အခဲ ကြားထဲကနေ တကူးတက လာပြီး အားပေးလို့ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ၊
ကျေးဇူးပါပဲ၊ ကျနော်လည်း ဒီလိုပဲ သူများတွေ ရိုက်ထားတာ လိုက်ကြည့်၊ လိုက်ဖတ်ပြီး ကြိုးစား ကြည့်နေတာ ပါပဲဗျာ..၊
Star trails တွေကိုတော့ ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ ရိုက်ကြတာ များပါတယ် ညီမရေ..၊ “ကမ္ဘာဟာ သူ့အချိန်အတိုင်း သူလည်ပတ် ဦးမှာပါ..” ဆိုတဲ့ ဆောင်ဦးလှိုင် သီချင်းကို သတိရတယ်..၊း)
ပေါ်မလာ အတော်ကြာဆိုတော့ နှစ်ကုန်ပိုင်း အလုပ်တွေ ပိနေတာဖြစ်မယ်လို့တော့ ထင်သားဗျ၊ လာပြီး အားပေးလို့ Welcome back ပါဗျား..၊း)
Thanks for your kind comment! That facebook-written-thing is nothing butawater bottle. :)
အညိုရောင် ကတ္တီပါကောင်းကင် ဆိုတဲ့ စကားလေး သဘောကျတယ်၊း) ဟုတ်တယ်နော်၊ အဲဒီအရောင်အတိုင်း ကို ဖြစ်နေတာပဲ..၊
ကျနော်ကတော့ ကောင်းကောင်း မမြင်လိုက်ရဘဲ လွတ်သွားတဲ့ ကြယ်တွေကို လွမ်းသွားတာ...၊းD
ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို ညည်းဖို့ နေနေသာသာ..၊ ချမ်းလွန်းလို့ မေးက တဂတ်ဂတ် ရိုက်နေတာဗျ၊ ဆိုလိုက်ရင်လည်း သီချင်းစာသားတွေက နှုတ်ခမ်းဝ မှာတင် ချက်ချင်းအေးခဲပြီး ကြွေကျမယ် ထင်တယ်၊း)
ညီမ လပြည့်ရိပ် ...
နောက်တခါ လိုအပ်တဲ့ ပုံတွေ အများကြီး ရရင်တော့ Time lapse ဗီဒီယိုလေး တစ်ခုလောက်တော့ ကျနော် လုပ်ကြည့်ပါဦးမယ်...၊
ဘီဘီလား..? သတိရတယ်ဗျ၊ ဒါပေမယ့် အေးလွန်းလို့ သောက်ချင်စိတ်က သိပ်မရှိတာနဲ့..၊ တကယ်က အဲဒီလို ရာသီဥတုမှာ အနည်းဆုံး 40% alcohol လောက် ပါတဲ့ဟာ တခုခုမှ ဖြစ်မှာ..၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ Swiss knife တွေကို hand-carry ထဲမှာ သယ်ခွင့် မပေးတော့ဘူး၊ ဂျနီဗာ လေဆိပ်က လုံခြုံရေး ဝင်ပေါက်မှာ ပုံးကြီးထဲ အပြည့်ပဲ..၊ မသိဘဲ အိတ်ထဲ ထည့်ယူလာသူတွေဆီက သိမ်းထားတာ..၊း) checked luggage ထဲမှာတော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး..။
တကူးတက အချိန်ယူရိုက်ထားတဲ့ ပုံကောင်းတွေ
ခုလိုပုံတွေရိုက်တဲ့ အတွေ့ အကြုံ နဲ့ ရိုက်လာတဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး အားကျ၏။
လတစင်းရဲ့ ညခင်းအလင်္ကာ၊ ရိုက်ကွင်းပေါ်က လူဆိုးနဲ့သူခိုး တို့ လိုပဲ သဘောကျမိသလို အားလဲကျမိတာပါ။
ကိုညီလင်းသစ်က 127 Hours ရုပ်ရှင်ကို လျှပ်တစ်ပြက်များ သတိရသွားသလားပဲ။
ကြယ်တွေကို ကြည့်ဖို့ နေရာကိုကြိုရွေးထားရမယ် ထင်တယ်။ မြိ့ပြနဲ့ ဝေးတဲ့ အလင်းရောင်မရှိတဲ့နေရာ၊ မြေပြန့် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကတောင်ကုန်းပေါ်မှာ နေရာယူရမယ်။မြေပြင်မှ၁၅ဒီကရီထိ သစ်ပင်အမြင့် မကွယ်ရဘူး။ ဒါမှ ၁၈၀ ဒီကရီ မြင်ကွင်းကို အပြည့်အ၀ မြင်ရလိမ့်မယ်။ တိမ်ကင်း စင်တဲ့ လမိုက်ညလည်းဖြစ်ရမယ်။ စပြီးမှောင်သည့်အချိန်မှစပြီး ကြယ်တွေ တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစ မြင်ရာကနေ ကြယ်အစုအဝေး နက္ခတ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုတက်လာတာကြည့်ရင်း အာရုဏ်တက် နေအလင်းရောင်ရတဲ့အထိပဲ ဘယ်လိုအချိန်ကုန်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး။ ကမ္ဘာကြီး လည်နေတာကို တိုက်ရိုက်ခံစားရတယ် ဆိုတာ အမှန်ပဲ။
ကိုယ်တိုင် ကြယ်တွေကို ကြည့်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ခံစားချက်လေး ကို သဘောကျသွားမိတယ်။
ကြယ်ကြွေကျတာ ကြည့်လိုက်ရလို့ ပျော်သွားတယ်။
ပုံကောင်းတွေ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ၊ နောက်တခါမှ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် သေသေချာချာ လုပ်ရမယ်..၊း)
ရိုက်ချင်ရင် စမ်းပြီး ရိုက်ကြည့်လို့ ရပါတယ်၊ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေသာ ရှိရင် ဒီလောက်မခက်ပါဘူး...၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကောင်းကင်က ဥက္ကာပျံ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခု လက်ကို လာပိချင် ပိနေမှာ...၊းD
အမှန်ပေါ့ဗျာ၊ ကြယ်တွေကို သေသေချာချာ ခံစားနိုင်ဖို့ အဲဒီ အခြေအနေတွေ လိုအပ်တာပေါ့၊ ဒီလို အနေအထားတွေ အောက်မှာ dream bed လိုဟာမျိုး တစ်ခုနဲ့ စိမ်ပြေနပြေ လှဲလျောင်းပြီး ကြည့်ရရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ အဲ.. ဓါတ်ပုံအတွက် ဆိုရင်တော့ ကြယ်တွေချည်းသက်သက် ရိုက်တာထက် စာရင် မြေပြင်က သစ်ပင်၊ တောင်တန်း စတဲ့ foreground တစ်ခုခု ပါရင် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်..၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ချမ်းချမ်းစီးစီး ပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ လည်းကောင်း၊ ပျော်စရာလည်း ကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုပါပဲ..။
ကြယ်တွေကြွေတဲ့ လမ်းမှာ ထရိုင်ပေါ့ထ်ကို ထမ်းရင်း တိုးတိတ်စွာ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်...။ ။
အဲ့လို ကြယ်တွေ အများကြီး ကြွေတာ ရှိတယ်ပေါ့ ..
ကြယ်ကြွေတာမြင်ဖူးတာ ၂ ခါပဲ ရှိသေးတယ် ..
ခုတောင် သေချာ မမှတ်မိတော့သလိုပဲ .. :P
ကျွန်တော်လဲ မလေးပိုစ့်ဖတ်ပြီး ကြယ်ကြွေတာ စောင့်ကြည့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ အစ်ကို ဒါပေမယ့် အဲဒီရက်တွေက ဒီမှာ မိုးက မပြတ်လို့ ဘာမှ မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ အစ်ကိုကတော့ တကယ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြန်ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို...
Dear Ko Nyi,
I was waiting for falling stars day according to Ma Lay's post but unluckly my place was heavily rain the whole week. At that night nothing stars on the sky. :(
Anyway thanks for your sharing nice pictures.
မလေးမှာ ရေးသာရေးရတာ ကြယ်ကြွေတဲ့ ၂ရက်လုံး နှင်းမုန်တိုင်းတိုက်တာ.. နောက်ရက်ကျတော့ သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်း ကောင်းကင်ကြီးက ကြည်လင်လို့...
ကြယ်တွေကို ချစ်သော မောင်နှမတွေ စုထိုင်ပြီး ငေးရရင် တော်တော်ပျော်စရာကောင်းမယ်..း))
I am also one of star lovers to watch them.I love nature around me since i was young not only stars but comets,milky ways ...too.I never bore to look at sky especially full moon night.Thanks for your wonderful night scene of star raining night.I can feel well how did you face cold in that night.Bravo bro:)
အေးလွန်းလို့ သီချင်းစာသားတွေ မေ့နေခဲ့တာဗျ..၊း)
ညက တိတ်ဆိတ်တာတော့ အမှန်ပဲဗျို့၊ လမ်းပေါ်မှာ လူသူလေးပါး ကင်းရှင်းပြီး ခွေးတစ်ကောင်၊ ကြောင်တစ်မြီးမှကို မရှိတာ..၊
ဟုတ်တယ်နော်၊ ကြယ်ကြွေတာကို ခဏခဏ မြင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်လောက်ဘူး...၊
အေးဗျ၊ ရာသီဥတုက ကိုယ်နဲ့အလိုတူ အလိုပါ မဟုတ်ခဲ့ ရင်တော့ မြင်ရစရာ အကြောင်းသိပ်မရှိ နိုင်ပါဘူး၊
Dear regular reader ...
Sorry to hear that your dream didn't come true because of that never-ending-rain. Let me also take this opportunity to thank you for reading my blog regularly. :)
ဒီမှာတော့ ရှားရှားပါးပါး အဲဒီရက်တွေက ရာသီဥတု ကြည်လင်နေလို့ ကျနော်လည်း စမ်းဖြစ်သွားတာပါ၊ သေချာတာပေါ့ မလေးရယ်၊ ကြယ်တွေကိုချစ်တဲ့ မောင်နှမတွေ လက်ဖက်တရိုး၊ အကြမ်းတစ်အိုးနဲ့ အတူတကွ ကြည့်ရရင် ပျော်စရာ အတိပဲဆိုတာ...၊း)
Oh..didn't know that you're alsoastars lover. Indeed, there is nothing more peaceful to watch than staying up late and feelafull moon night. As for my stars photo, thanks for your appreciation though I wasn't satisfied and think to do again whenafavourable conditions come up. =)
မလေးရဲ့ ဖဘ က ကြယ်ပွင့်များဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ် မှာ ရှဲခွင့်ပြုပါ။
သဘောရှိပါဗျား၊ ပုံတွေက သိပ်မကောင်းလို့ ကျနော့် အနေနဲ့ နည်းနည်း အားနာတာ တခုပါပဲ..။
ဒီဇင်ဘာမှာ ထပ်ကြွေဦးမယ်.. ဒီဇင်ဘာ ၁၃-၁၄ Geminids ကြယ်မိုး.. ဒါပေမယ့် လရောင်က ရှိနေမှာ..
ဗဟုသုတအတွက်ရော ဓါတ်ပုံကြည့်လိုက်ရတာရော မလေးရော ကိုညီလင်းသစ်ပါ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မလေး(အိမ့်ချမ်းမြေ့)ရဲ့ 'ကြယ်မိုးရွာမယ့်ည' ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာ။ အခုလို စိတ်ဝင်စားနေတာလေးကို ထူးထူးခြားခြားလေး ဓာတ်ပုံပညာအသုံးချပြီး မျှဝေပေးတာ အထူးကျေးဇူးပါ မောင်ညီလင်းရေ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၃-၁၄ ကိုလည်းစောင့်မျှော်နေတယ်နော်။
သတင်းပေးတဲ့ မလေးနဲ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ ကိုညီကြောင့်သာ ဒီလို ထူးခြားတာလေး ဖတ်ရတာ..သိုင်းကျူး..Canon Camera ကြီးကို သရေယိုသွားတယ်.. :)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီ ဒီဇင်ဘာ ၁၃-၁၄ မှာကြွေမယ့် Geminids က တစ်နာရီကို အလုံး ၆၀ လောက်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတုန်း ရှိသေး ဒီနှစ်မှာ လရောင်က ရှိနေမယ်တဲ့၊ ဒါပေမယ့် ရှေ့နှစ် ဇန်နဝါရီ ၃-၄ မှာကြွေမယ့် Quadrantids မှာတော့ သန်းခေါင်မှာ လရောင်ပျောက်မှာမို့ ပိုပြီးမျှော်လင့် နိုင်မလားပဲ၊ သူလည်း ၁ နာရီကို အလုံး ၄၀ ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတယ်၊ အဲဒီမှာ အဆင်မပြေရင်တော့ လာမယ့် နွေဦးရာသီမှာ ကြွေမယ့် ဧပြီ ၂၁-၂၂ က Lyrids ရယ်၊ မေ ၅-၆ က Eta Aquarids ရယ်ကို စောင့်ရမှာပဲ၊ အအေးလည်း ပေါ့သွားလောက်ပြီ၊ ဒါမှ မရသေးရင် နောက်ဆုံး ဇူလိုင် ၂၈-၂၉ က Southern Delta Aquarids ရယ်၊ သြဂုတ် ၁၂-၁၃ က Perseids ရယ်မှာတော့ စိတ်ကြိုက်ရမယ် မှန်းတာပဲ မလေးရေ့၊ နွေရာသီလည်း ဖြစ်လို့ ရာသီဥတုက အဆင်ပြေနိုင် တယ်လေ..၊း)
စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လာပြီး အားပေးတာ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်နော်...၊
ဟုတ်ကဲ့..၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃-၁၄ မှာ ကြိုးစား ကြည့်ပါ့မယ်၊ အဲဒီမှာ မရရင်တော့ ဇန်နဝါရီ ၃-၄ ပေါ့..နော၊း)
ကျေးဇူးပါဗျာ..၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဦးအစ ရှာဖွေ၊ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ မလေးကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းလှတယ်..။
ကြယ်ကြွေတာမြင်ဘူးပေမယ့် ဒီလိုအများကြီးကို မြင်ရတာတော့ပထမဦးဆုံးပါ။
အားထုတ်မှု၊ပညာ၊စေတနာ တွေကို တကယ်ချီးကျူးပါတယ်။
အခြေအနေပေးရင် အော်ရိုရာ auroraလည်းရိုက်ပေးနော်။ တကူးတကတော့ ခရီးမထွက်ပါနဲ့။
I simply just wish I could witness the amazing event and could take those amazing pictures by myself. Thanksalot for sharing and I really love the stars, and the peaceful night.
စာကြွေးတွေ တပုဒ်ချင်းဖတ်လာခဲ့တာ ပြီးခဲ့ပြီဗျ။
နောက်တခေါက်ဆိုရင် ဖေ့ဘွတ်ထဲကို ၄၀ ရာနှုန်းလေး အနေတော်စပ်.. ပီကေအစား စနက်လေးယူ.. ကြယ်တွေကကြွေလို့.. ကင်မရာက တိုင်ဘာနဲ့ တချပ်ချပ်.. ကိုညီလင်းသစ်ကလဲ ဖေ့ဘွတ်လေးနဲ့ ဟန်ကျလို့ ဖြစ်နေရမပေါ့..
ကိုညီလင်းသစ်ရေ... ဇွန်လည်း ကိုယ့်ခရီးသွားပို့စ်လေးကို တင်ဖြစ်အောင် အချိန်လုပြီး အတင်းတွန်းထိုးတင်လိုက်ပေမယ့် တခြားဘလော့တွေကို မရောက်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ။ စာကြွေးတွေရှင်းရမှာ မနည်းမနောပဲ။ :D
ကြယ်ပန်းတစ်ခင်းနဲ့ လင်းတဲ့လူအကြောင်း စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားတယ်။ ဇွန်ငယ်ငယ်ကလည်း ကြယ်တွေကို သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ။ ခုလို ကြွယ်တွေကြွေတဲ့အကြောင်း သတင်းပေးတဲ့ မလေးကိုရော သေသေချာချာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးပြီး ဝေမျှတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကိုရော အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟို... အပေါ်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ဇွန့်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးတစ်ခုတွေ့တယ်။ တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ဘူး၊ Snickers ပါ။ :D အန်ဂိုလာခရီးစဉ်အကြောင်း အချိန်ပေးပြီး အေးအေးဆေးဆေး လာဖတ်ပါဦးမယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ခုတော့ အပြင်သွားစရာလေး ရှိနေလို့။
အဲ့သည်က လူတွေရော အဲ့သည်လို စောင့်မကြည့်ကြဘူးလား။ ကျနော်လည်း အဲ့လို စောင့်ကြည့်ချင်တယ်။ မလေးဆီက ကြယ်ကြွေမယ့် (အရှေ့တိုင်းစံတော်ချိန်နဲ့ ) မှတ်ထားပေမယ့် မကြည့်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ညဖက် တစ်ယောက်ထည်း အဲ့လို ကြည့်ရမှာလည်း နည်းနည်း ကြောက်တာပါပါတယ်။ ကျနော် လာတော့ ပုံတွေ မမြင်ရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လဲ မသိ။ မလေးရဲ့ ဖဘ မှာတော့ မြင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ ကိုညီ ရိုက်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာနေတုန်းကကြယ်တွေအများကြီးတွေ့ရပေမယ့် ဒီက ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေသိပ်ရှားတာ သတိထားမိတယ် ဘာကွာလဲတော့ နားမလည်လို့ မသိဘူး ... အိမ်ပြန်ချင်စိတ်နဲ့ အပြင်ထွက်ဖြစ်ရင် မိုးကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ကြည့်ဖြစ်တာ အကျင့်တခုဘဲ ကြယ်တော့ တွေ့ရခဲတယ် လေယာဉ်ပျံတွေဘဲ အများကြီးတွေ့နေတယ်း)
ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကို ကြည့်ရတာ ကြိုက်လို့လားမသိ ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျတယ်... အထူးသဖြင့် တိုင်တယ်လ်ကိုပဲ *ကြယ်ပန်းတခင်းနဲ့ လင်းတဲ့လူ* တဲ့...
မီးမလာတလာ ရန်ကုန်မြို့မှာတောင် ကြယ်ကြည့်ရတာခက်တာ အဲဒီမှာဆိုတော့ နေရာရှာခက်တာ အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်... နယ်တွေကိုရောက်မှ ကြယ်တွေကို သေချာမြင်ရတာ... စိတ်ထဲမှာ ကြယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် သတိရနေဆုံးက ဒယ်လတာသွားတဲ့ သင်္ဘောပေါ်က ဦးထိပ်မှာထိုင်ရင်း ကြယ်တွေကြည့်ခဲ့ရတာကိုပဲ...
နောက်ပြီး ညီလင်းရဲ့ ဒီလိုပို့စ်လေးတွေက ဓါတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာတွေအများကြီးရတယ်...၀ါသနာပါပြီး သိတ်မရိုက်တတ်သော စုတို့လိုလူတွေအတွက်လေ...ဒါပေမဲ့ accessories တွေ ထပ်ဝယ်ဖို့တွေ တွေ့တော့ စိတ်ညစ်ပြန်ရော...
ကြယ်ကြွေတာကို အခုမှ သေချာမြင်ဖူးတာပဲ
တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး ကိုညီ
ညီမ ရင်ထဲ အစွဲတစ်ခုတော့ ရှိနေတယ်
အဲဒါ ကြယ်တွေ ကြွေတယ်ဆိုတာ....ဂြိုလ်လေးတွေ မီးလောင်ပျက်စီးတာတဲ့
ကြယ်ကြွေတယ် ကြားရတိုင်း ၀မ်းနည်းတယ်
မမြင်ဖူးတဲ့ ပုံလေးတွေ မြင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုညီ။